Talooyin Caafimaad Oo Soonka Ku Saabsan | Xaqiiqonews
Talooyin Caafimaad Oo Soonka Ku Saabsan
Dad ugu badan dhib badan ayey dareemaan maalmaha ugu horeeya ee soonka, dhaqaatiirta ayaa ka jawaabay sababta caafimaad ee ka dambeysa rafaadka maalmaha koowaad.
Mushkiladda caafimaad ee ugu horeysa ee qofka soomani soo wajado waa “qaleylka jirka” waxaana qaleylkaasi ka dhalan kara:
Madax xanuun: Madax xanuun gaar ahaan goonjab ayaa dhasha sababtoo ah maskaxda qofka oo si dhaqso kaga falcelineysa qaleylka ka dhashay biya yaraanta jirka soo wajahday.
Sidoo kale qaleylka jirka ayaa sababa Daal, qofka ayaa dareemaya awood yar, gamaanyo iyo hurdo.
Sidoo kale Aqri: Sidee Soonka U Saameynayaa Difaaca Jirkaaga?
Dhaqaatiirta ayaa dadka ku waaninaya in ay badsadaan biyo cabista gaar ahaan qofka oo caba ugu yaraan 10 koob oo biyo inta uu afuran yahay, taasi oo qofka ka ilaalineysa cadurada ka dhasha biya l’aanta sida cudurada ku dhaca kilyaha iyo kuwa wadnaha.
Sidoo kale si looga hortago daalka soonka, qofka waxaa lagula talinayaa in uu helo hurdo ku filan, isla markaana uu raaco jadwal cunto oo caafimaad leh, sida qofka in uusan colaasha buux dhaafinin iyo qofka in uu iska yareeyo cabista badan ee sigaarka, qahwada iyo shaaha.